It is me. Ko Niknayman.: ဒီမှာ ရက်ရက်စက်စက်ရိုက်နှက်နေတာ၊ ကြည့်ကြပါဦး။
ဆန္ဒပြသူတွေကို ဖမ်းဆီးပြီး၊ ရက်ရက်စက်စက် ရိုက်နှက်နေတာကို ခိုးရိုက်ထားတဲ့ ဗွီဒီယိုမှတ်တမ်းပါ၊ သက်ဆိုင်ရာကို လက်ဆင့်ကမ်း အသိပေးကြပါ။http://edition.cnn.com/video/#/video/world/2007/10/02/rivers.myanamar.beatings.cnnTo download - http://www.mediafire.com/?9latgvoxdqu
Posted by Ko Niknayman at 8:25 PM